पादबाट पनि कोरोना फैलिन सक्ने ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > रोचक > पादबाट पनि कोरोना फैलिन सक्ने !
पादबाट पनि कोरोना फैलिन सक्ने !
सिड्नी । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव इतिहासको महाशत्रुका रूपमा व्याप्त विषाणु कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ, अनुसन्धान अझै जारी छ । शरीरभित्र प्रवेश गर्ने प्रमुख माध्यममा हात, मुख, नाक र आँखा हो भन्ने त करिब तय भइसकेको छ तर यसको स्रोत के–के हुन सक्छ, यसमा नयाँ–नयाँ तथ्य बाहिर आइरहेका छन् ।
हालै एक अध्ययनले पादबाट पनि कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने देखाएको छ । यद्यपि यसलाई लिएर केही विज्ञ त्यति चिन्तित देखिएका छैनन् र यस्तो पनि हुन सक्छ भन्नेमा धेरैले आशंका रहेको छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा भने व्यापक चर्चा पाइरहेको कोरोनाको यो स्वभावको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न पनि नसकिने स्थिति छ । यो सम्पूर्ण चर्चाको शुरू अस्ट्रेलियाका एक डाक्टरको केही टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा आएपछि भएको हो ।
अर्कोतर्फ विज्ञहरू यसको सम्भावना नभएसरह भएको बताउँछन् । यस्तो हुने भनेको जब कसैले पाद्दा अर्को व्यक्ति अत्यन्त नजिक हुनुपर्नेछ । बीचमा कुनै न कुनै कपडा हुनुले ड्रपलेट्स बाहिर फैलिनु लगभग असम्भव हो ।
यद्यपि दिसामा भाइरस हुन सक्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने बताइएको छ । त्यसैले ट्वाइलेटको सफा–सुग्घरमा अत्यन्त ध्यान दिन आवश्यक छ । कैयौं संक्रमणमा केही बिरामीमा शुरूमा पखाला लागेको र त्यसपछि मात्र कोरोनाका अन्य लक्षण देखिएका छन् । यस्तोमा सावधान हुनु राम्रो हो ।
कोरानो भाइरस फैलिने सामान्य तरिका भनेको हाच्छ्युँ गर्दा र खोकीबाट निस्कने स–साना थोपा नै हो । मुख र नाकबाट निस्कने साना ती थोपाका माध्यमबाट भाइरस बाहिर आउन सक्छ । त्यसपछि कुनै व्यक्तिसँगको सीधा सम्पर्कबाट पनि यो फैलिन सक्छ ।
संक्रमित हातबाट कुनै वस्तु छुँदा पनि भाइरस केही समय ती वस्तुमा रहन सक्छ र त्यहाँबाट अन्य व्यक्ति त्यसको सम्पर्कमा आउन सक्छ । -एजेन्सी
२०७७ वैशाख २९ गते १८:५६ मा प्रकाशित
'भारतसँग सधैँ बाझेर सकिँदैन, सीमामा पर्खाल र काँडेतार लगाऊँ’
दुर्गममा डेढ लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाइने, ४४ करोड खर्चेर ढुवानी
नेप्सेमा ५ लाख ३७ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
जापानिज भाषा परीक्षा तयारी अन्तिम चरणमाः ६० हजार नेपाली नर्स लैजाने